About Us - Zhejiang Kavoun Auto Qaybo Co., Ltd
bamka biyaha Auto
Oo nidar V-Belt
masaxa daaqadda gaariga
suunka Hexagonal (double V-suunka)
Edge qaydhiin V-suunka
Dhaqidda suunka mashiinka
Welcome to Zhejiang Kavoun Auto Qaybo Co., Ltd (oo hore loo Ningbo Hi-Tech Zone Kavoun Gudbinta Qaybo Co., Ltd)
Shirkadda Our waa soo saaraha xirfad iyo dhoofinta ee mashiinka kexeeyey qaybo iyo suumanka la isugu gudbiyo. Ka dib markii in ka badan toban sano ah ee horumarinta, in ka badan dersin gobol iyo magaalooyinka ayaa lagu qotomiyey in ay warbaahinta iibka la farsamo xirfadeed iyo kooxaha iibka xirfadeed, iyo xoog horumarka farsamo oo xoog leh. Waxaan maray ISO9001 ah: 2000 nidaamka maaraynta tayada shahaado iyo dhaqan caadiga ah nidaamka maamulka tayada TS16949.
Wax soo saarka ugu weyn ee shirkadda yihiin "KAVOUN" iyo "XIAOHUOBAN" brand HNBR Timingbelt iyo CR Timingbelt, marsho suunka synchronous double-dhinac, xawaaraha Doorsoome suunka V, gaari suunka V, suunka waqtiga auto, suunka waslad multi, adkayn wheel, suunka synchronous wheel, wheel suunka, bamka, caleemaha masaxa daaqadda, duudduubay V-suunka, iyo qaybaha kale ee la isugu gudbiyo. Waxaa si weyn loo isticmaalaa in gaari, qalab mashiinka, dhar, tubaakada, kiimikada, cuntada, qalabka korontada, baakadaha, qalabka korontada qoyska, miinooyinka, mashiinada injineernimada iyo warshadaha kale.
Wax soo saarka shirkadda waxaa lagu gartaa technology sare, tayo sare leh, oo tayo fiican leh, iska caabin ah da 'ah, iska caabin ah daxalka, iska caabin heerkulka sare, muuqaalka quruxda badan, raagaya iyo raagaya iyo wixii la mid ah. Waxaan ku ammaantaada sare ka macaamiisha helay iyo iibiyey adduunka oo dhan.
Laga soo bilaabo taariikhda ee ay dhasho, Shirkadda, u hoggaansanaayeen rogo oo ah "kor u qaadida horumarka la sayniska iyo tiknoolajiyada, qaadashada tayo leh sida ugu aasaasiga ah iyo macaamiisha xuddun", uu yeesho ruuxa "dulqaadashada, hal-abuurka iyo heerka koowaad". Iyada oo hal-abuurnimo farsamada, hal-abuurnimo maamulka iyo cilmi-baarista iyo horumarinta ee alaabta technology sare oo cusub, shirkada si joogto ah hagaajinaysaa content technology ee alaabta ka, waxaana loogu talagalay shirkadda iyo shirkadda. Macaamiisha guuleysan berri ah more cajiib ah.
No.118, Dingxiang Road, Hi-Tech Zone, Ningbo Shiinaha
hadda na soo wac: 0086 574 86174058